इन्टरनेट पोर्नले मस्तिष्कलाई असर गर्छ - पुरस्कार इनाम
मस्तिष्क आधारभूत इन्टरनेट पोर्नले मस्तिष्कलाई असर गर्छ
यदि हामी केवल एक निर्देश संग मैनु भएको थियो म्यानुअल बनाउँछ जो हामी टिक! यसले वास्तवमा कसरी इन्टरनेट अश्लील दिमागलाई प्रभाव पार्छ एक अध्यायको साथमा मद्दत गर्न सक्दछ। सुसमाचार हो, यो जान्न कहिल्यै ढिलो छैन। यो एक जटिल कुरा हो, तर कार जस्तो, हामीलाई सुरक्षित तरिकाले ड्राइभ कसरी जान्नको लागि इन्जिनको बारेमा सबै कुरा थाहा छैन।
इन्टरनेट पोर्नोग्राफी अतीतको अश्लील जस्तो छैन। यसले धेरै प्रत्यक्ष र बेहोश तरिकामा मस्तिष्कलाई असर गर्छ। यो विशेष गरी उच्च परिष्कृत टेक्नोलोजी राजनैतिक उत्तेजना प्रविधिको प्रयोग गरी हाम्रो विचार र व्यवहार परिवर्तन गर्न डिजाइन गरिएको छ। यी प्रविधिले प्रयोगकर्तालाई नशे कायम गर्न सक्छन् र अश्लीलको थप चरम शैलीहरूमा वृद्धि बढ्न सक्छ।
यी चार छोटो भिडियोहरूले कसरी वर्णन गर्छन्। तिनीहरूले यस अति-उत्तेजक मनोरन्जनको प्रलोभनको लागि मस्तिष्क कत्ति संवेदनशील हुन्छन् भनेर व्याख्या गरेर मुद्दालाई दोषी ठहर्याउँछन्। यो विशेष गरी किशोर दिमागमा लागू हुन्छ। मल्टी-अर्ब डलर अश्लील उद्योग केवल नाफामा मात्र रुचि राख्दछ प्रयोगकर्ताहरूमाथि मानसिक र शारीरिक साइड इફેक्ट होइन।
यो पहिलो minutes मिनेट लामो छ र अश्लील प्रभावको बारेमा न्यूरोसर्जनसँग अन्तर्वार्ता समावेश गर्दछ। यो न्यूजील्याण्ड टिभीले बनाएको वृत्तचित्रको एउटा अंश हो।
यो चलाख २ मिनेट एनिमेसन यौन सम्बन्ध र सम्बन्धमा आक्रामकता मा प्रभाव वर्णन गर्दछ।
स्ट्यानफोर्डको सामाजिक मनोविज्ञान प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डोaमिनेटको TED कुराकानीमा 'उत्तेजक लत' हेरेमान्छेहरूको कमी"।
"ठूलो अश्लील प्रयोग"पूर्व विज्ञान शिक्षक र लेखक गैरी विल्सन द्वारा 16 मिनेट TEDx कुरा हो। यसले जिम्मार्डो द्वारा चुनौती सेट गरिएको जवाफ दिन्छ। यो YouTube मा 12.6 मिलियन भन्दा बढी हेरिएको छ र 18 भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ।
Gary ले TEDx कुराकानी एक लामो प्रस्तुतिमा (1 घण्टा 10 मिनेट) अद्यावधिक गरेको छ "तपाईंको मस्तिष्क पोर्न- कसरी इन्टरनेट पोर्नले तपाईंको मस्तिष्कलाई असर गर्छ"। स्याङ्किङ्ग छोड्ने कथाहरू र अश्लील छोड्नका लागि सजिलो सुझावहरूको साथ संलग्न व्यक्ति र जानकारीपूर्ण पुस्तक मनपर्नेहरूको लागि Gary को हेर्नुहोस् तपाईंको ब्रेन पोर्न: इन्टरनेट पोर्नोग्राफी र लतको उभरिरहेको विज्ञान पेपरबैक मा उपलब्ध, जलाने या एक अडियोबक्स को रूप मा। उहाँले यस उत्कृष्ट मा धेरै प्रमुख अवधारणाहरु लाई पनि सेट गर्दछ पोडकास्ट (56 मिनेट)।
यस 'मस्तिष्क मूलभूत' खण्डमा, इवार्ड फाउण्डेशनले मानव मस्तिष्कको भ्रमणमा लिन्छ। तपाईं यहाँ मूलभूत बारेमा थप जानकारीको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ दिमाग एनाटमी McGill विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित। मस्तिष्कले हामीलाई मद्दत गर्न विकसित गरेको छ बाँच्न र पक्कै। 1.3kg को लगभग वजन (लगभग 3lbs), मानव मस्तिष्कले शरीरको वजनको 2% बनाउँछ, तर यसको ऊर्जाको 20% को वरिपरि प्रयोग गर्दछ।
मस्तिष्कले सामान्य सर्तहरूमा कार्य कसरी गर्ने भनेर बुझ्न, हेर्नुहोस् मस्तिष्क को विकासवादी विकास। अर्को हामी देख्नेछौं कि भागहरू कसरी सिद्धान्तहरूको सिद्धान्त अन्वेषण गरेर काम गर्दछ neuroplasticity। त्यसोभए हामी कसरी लत विकास गर्न सिकाउने र अनियन्त्रित बानी गर्छौं। हामी यो पनि हेर्नुहोस् कि मस्तिष्कले यसको मुख्य माध्यमबाट कसरी आकर्षक आकर्षण, प्रेम र यौन सम्पर्क गर्दछ neurochemicals। हामी यी पुरस्कार तिर किन किन उत्प्रेरित छौं, यो मस्तिष्कको उत्प्रेरक वा जान्न महत्त्वपूर्ण छ इनाम प्रणाली। किन किशोरीको सुनको उमेर यति थरथर, मजा र भ्रामक छ? यस बारेमा बढी पत्ता लगाउनुहोस् किशोर मस्तिष्क.